Kaatalogga matoorrada korantada
Kaararka Gawaarida Korantada
Kaatalogga Korantada Korantada
Soo hel buugga-yar ee matoorada taxanaha Y2
Y2 matoorrada korantada ee taxanaha ah waxaa lagu soo saaray farsamooyin cusboonaysiin ah
Xalalka ballaadhan ee ballaadhan ayaa ka tarjumaya hal-ku-dhigga ah in alaabooyinka Regal Beloit ay yihiin. Dhammaan matoorrada korantada ee ku qoran buug-yarahaan waxay la kulmaan kuwa ay khuseyso. Buugga korantada ee korontada laga helo alaab-qeybiyaha Shiinaha. SADDEX MADASHA SHAQAALAHA SADDEXA AH SHAQAALAHA LOOGU SAMEEYO GOST STARAR, Mashiinka saddex waji ee matoorrada si waafaqsan GOST caadiga ah. The 5AH taxane seddex waji oo matoorro induction ah ayaa loogu talagalay howlgalka muddada-dheer ee gudaha albaabka.
Y2 Taxane Koronto Weyn oo Sare Taabanaysa Sadex Weji Induction Electric Motor
Waa lagama maarmaan in matoorrada korantada lagu rakibo shaqaale khibrad leh, aqoon iyo karti leh. Ku dhowaad qarni heer sare ah motor iyo soosaarida koronto dhaliyaha. CHINA GOST STANDARD ELECTRIC MOTORS, GOST seddex waji matoor koronto waa sheyga cusub ee aan ugu talagalnay suuqa yurubta bari, sida Russia, Ukraine, iwm.
Aaladda matoorka ee taxanaha Y2 waxay ku jiraan qaabeyn u burburtay iyo nooc fanaan la qaboojiyey
Cabirka iyo taxanaha soo saarida ee mashiinada korantada wareega. Waxaa si gaar ah loogu talagalay suuqa Yurub, oo sanduuqiisa uu ku yaal dusha sare ee mootada. Tani Qoraalkan wuxuu qeexayaa fasallada wax ku oolka ah ee isku-dhafan ee isku-dheelitiran ee cusub. Ugu weyn heerarka ee matoorrada danab hooseeya. ABB waxay bixisaa laba nooc oo danab hooseeya mashiinka induction taxane ah. Matoorrada induction ee caadiga ah, oo sidoo kale si ballaadhan loogu adeegsado warshadaha kiimikada, saliidda iyo gaaska, ayaa lagu soo bandhigay buugga gaarka ah.
Kaatalogga IEC Standard PDF
Khariidadda PDF ee Gost Standard
Soo hel buugga-hayaha taxanaha ee korontada ku shaqeeya ee korantada leh ee Yej
Sannadka taxanaha korantada elektaroonigga ah ee YEJ
Shiinaha YEJ Taxanaha Electromagnetic Biriigu Saddex waji Electric Motor buugga ee YEJ Alu Saddex Wajiga Biriigu Motor, YEJ Saddex Waji Phase Biriigu Induction Motors. Yurub gudaheeda, waxtarka tamarta ee matoorrada danab hooseeya.
YEJ taxane elektromagnetic saddex-waji asynchronous motor
YDEJ2 taxanaha matoorrada jejebiyey elektromagnetic waa alaabada la hagaajiyay ee taxanaha YEJ, waxay waafaqsan tahay shuruudaha JB / T6456. Imcore waa xirfad koronto matoorka matoorka iyo wax soosaarka rotor.
Caabbinta korantada ee awoodda loo yaqaan 'potentiometer' way ku kala duwan tahay saamiga culeyska
Marka la rakibo guryaha mootada mashiinka lagu wareejiyo waa la cusboonaysiiyaa waxay ku haysaa saxarada meesha. Dhibaatooyinka BMW 320d BMW 3 Taxanaha ayaa ah noocyada ugu badan ee iibinta shirkadda. Waxay ku saleysan tahay Jarmalka, Bavarian Motor Works - BMW - waxay soo saartaa in ka badan hal milyan oo gawaari sanadkiiba.
Soo hel buugga-yar ee matoorrada DC ee warshadaha birta
Motoroollada DC sida caadiga ah waxaa loo adeegsadaa waa codsiyada u baahan hagaajinta xawaaraha matoorka
Mashiinnadayada DC waxay bixiyaan xulasho ballaaran oo ah qabanqaabooyinka dhejinta, nidaamyada qaboojinta. Iyadoo in ka badan 100 sano oo khibrad ah soosaarka matoorka ah. DC matoorada Motors & Generators buug-yaraha Motortecnica iyo Adeeg.
2 Gawaarida iyo kontaroolada, matoorrada iyo buugga gudbinta awoodda farsamada
Buug-yarahaan wuxuu siinayaa macluumaadka farsamada ee ku saabsan matoorrada DC ee loogu talagalay dalabka warshadaha. Taarikada xogta ugu weyn waxay ku jirtaa bir bir ah oo si adag ayaa loogu xiraa mootada.
Tirakoobka adduunka ugu weyn ee la raadin karo ee matoorrada DCelectric ee warshadaha cusub, la isticmaalay & dheeraadka ah iib ah. Mashiinka hawada ee heerka warshadaha, qaab dhismeedka fudud, cabir yar, culeys fudud, hooras sare.
Guji Si Aad Kusoo Degto Katalog PDF
Kaatalogga hal wejiga muruqyada bir & aluminium
Ujeedada guud ee matoorka wejiga kaliya
Qalabka tamarta sedexda waji qulqulaya matoorrada induction. Mashiinka induction ee pahse ah saarney wuxuu la macaamilaa astaamaha farsamada iyo korantada ee matoorrada qafisyada asynchronous squirrel. Xaaladda "diidmada", korantada sahayda sareyso ayaa sareysa tan hadda jirta. Dadaal kasta ayaa loo qaaday si loo hubiyo in xogta ku qoran buug-yarahaan ay sax tahay.
Crompton Greaves FHP Khariidad Wejiga Mashiinka Kaliya
1) Dhammaan moodooyinka kor ku xusan waa Hal Waji marka laga reebo GF 6739. 2) 36 ”matoorrada marawaxadaha ayaa sidoo kale la heli karaa markii la codsado. 3) Xawaaraha beddelaha xawaaraha ikhtiyaari ah. Noocyada hal-xawaare saddex-waji matoorro induction ah. MOODARADA waxaa laga soo saari karaa SAMBARKA DUGSIGA SARE EE DUGSIGA ALUMINUM. In kabadan 50% wareejinta waxaa soo saaray matoorka korontada. Saddex waji iyo hal waji matoorrada korantada ee asynchronous, gebi ahaanba lifaaqan. Daawaha aluminium ee loo yaqaan 'Die-cast aluminium', marka laga reebo B5 flange oo loogu talagalay cabbirka 160S.
Saddex-waji iyo hal-waji matoorro koronto
La tasho Cantoni Motor guud ahaan Ujeeddada Guud ee Hal-ku-dheelitirka Matoorrada ee DirectIndustry. Dhammaan nashqadaha, macluumaadka iyo sawirrada lagu soo bandhigay buugyarahan waxaa iska leh ATT Electric. MOOSHADDA MOOSHARKA MOOSHARKA TILMAANTA AH WADAJIRKA, Qiimaha lagu iibsado mootada korantada iyo wadista, tusaale ahaan, waa uun boqolkiiba 1-3. Guryaha daawaha Aluminium ogaadaan miisaanka fudud. Arag farqi weyn. Bilaabidda waxqabadka hal-xawaare saddex-waji matoorrada soo-kicinta ee korantada.
Katalogalka Guryaha Birta ee PDF
Kaatalogga Guryaha Aluminium PDF
Soo hel buugga-yar ee matoorka korantada ee AEEF
Range of matoorno ay dabooleen buug-yarahaan
Sharaxaadda Alaabada AEEF matoor taxane ah waa saddex waji, gebi ahaanba ku lifaaqan oo fan-matoor koronto qaboojiye leh qafis dabagaale. Shaqaaluhu wuxuu TECO Motors ka dhigayaa mid aad u dheer oo bixiya hawlgal qiimo jaban.
Taxanaha AEEF Taxanaha Saddexda-Wejiga ah Koronto Gawaarida
Buugyarahan waxaa ku jira xog farsamo oo ku saabsan dhammaan matoorada korantada ee ay soo saartay iyo / ama ay qaybisay OMEC. Motors. In ka badan 100 sano oo khibrad ah oo ku saabsan naqshadeynta mootada iyo arjiga.
Saddex waji AEEFhorizontal shafka korantada ku shaqeeya
Waxaan nahay shirkado caan ah oo caan ah iyo alaab-qeybiyeyaasha yt / aeef saddexda waji ee korantada soo-saarista korantada ee Shiinaha. Gebi ahaanba ku lifaaqan oo fan-qaboojiyey matoor koronto leh qafis dabacsan
Soo hel buugga-hayaha qumbaha qumbaha qumbaha
Shiinaha 200W Qumbaha Digger AC Single Wajiga Korontada
Shiinaha 200W Qumbaha Qashin-qubka AC Mashiinka Korantada Hal mar ah, Raadi faahfaahinta ku saabsan Shiinaha Gawaarida, Mashiinka Korantada ee laga helo 200W Qumbaha Digger AC Mashiinka Korantada Hal Mar.
200W Qumbaha Digger AC Single Wajiga Korantada
200w Qumbaha hal wajiga halbeegga induction Xaaladaha Shaqeynta Heerkulka deegaanka. Neal markale wuxuu lahaan doonaa qodistiisa iyo tanaasulaad kale. Universal Lighting riant waxay ku siisaa dhammaan korantada aad u baahan tahay.
Yzb taxanaha qumbaha cusub ee qumbaha
Neal mar labaad ayuu yeelan doonaa qodayaasha iyo tanaasulaad kale oo ku saabsan Cavalcade. Markii aan helno su'aalahaaga, waxaan kuu soo diri doonnaa buugga loogu talagalay, qiimaha wax lagu iibiyo, kartida qumbaha qolof dubbe milix · jacques iibinta qalabka wax lagu jajabiyo.
Soo hel buugga-hayaha qaybaha mowjadaha korantada
Qeybaha Beddelka Gawaarida Warshadaha
Buug-yarahan wuxuu muujinayaa qaybaha beddelka ugu badan ee la codsado ee saddexda waji ah, nooca awoodda. Waxay ku bilaabatay sidii dukaan dayactirka mootada iyo sanadihii la soo dhaafay. Fadlan ka dhex eeg buugyarahayaga.
Qeybaha Bedelka ee matoorrada korantada iyo bambooyinka
Ka hel qaybaha mashiinkaaga lagu beddelo Grainger! U dukaamee noocyada burushka mootada, farsamooyinka burushka beddelka, ilaha mootada. Hel Qiimaha Jumlada iyo Maraakiibta Bilaashka ah.
Qiimaha iibsiga matoor koronto iyo wadis
Helitaanka ku habboon ee loo soo maro Mareykanka HOOYADA halkan waxaad ka heli kartaa buugaagta sumadaha. Sidoo kale sahamin qoraallo, xaashiyaha xogta & suugaanta wax soo saarka kale. Si dhakhso leh uga hel qaybaha dayactirka iyo macluumaadka adeegga kombaresaradayaasha Copeland.